Ikhishi Lanamuhla Likucwila
Ikhaya / Umhlahlandlela Wompompi / Ikhishi Lanamuhla Likucwila
2020 / 10 / 27 UkwahlukanisaUmhlahlandlela Wompompi 1055 0
Uma uthathe isinqumo sokuthi ufisa ukuvuselela ikhishi lakho ngaleso sikhathi, enye yezinto zokuqala ozofuna ukucabanga ngokuzenza kungaba ukufaka okuncane kokuthinta kwanamuhla. Kuyiqiniso ukuthi abantu abaningi empeleni bathanda ikhishi lokuvuna elingaphezulu kakhulu ngoba lihle kakhulu kepha, ukungeza amagajethi ambalwa ezungezile akuwona umqondo omubi.
Hlobo luni lwe Isikhiphi sekhishi Ingabe unayo?
Isibonelo, bewazi ukuthi ungaba nompompi wasekhishini odonswa phansi ukuthi ngokuqinisekile uzobukeka muhle ukwedlula ompompi wasekhishini ojwayelekile futhi ngasikhathi sinye uzoba usizo kakhulu? Uma ungene ku-inthanethi futhi usesha i-matte black donsa phansi ompompi basekhishini, ngoba nje awusoze wenza iphutha ngomnyama omncane, singakuqinisekisa ukuthi uzozithola uphambi kwezinketho eziningi ezahlukahlukene ezizokwenza indlu yakho ibukeke yinhle ekhishini lakho bheka emangalisayo.
Ipompo lekhishi elimnyama ngokuyisisekelo lizofanisa konke okuhle kakhulu. Uma ufuna isitayela sesimanje ungasebenzisa ompompi basekhishini abamnyama. Ngasikhathi sinye, uma ufuna ukwenza okuthe xaxa ngokwendabuko futhi uye ngesitayela sokuvuna, nakanjani singaqinisekisa ukuthi umpompi omnyama wasekhishini ngokuqinisekile uzoba ngumdlalo wanoma yini onayo engqondweni. Umbala ongathathi hlangothi futhi nakanjani umasha ikhishi lakho.
Khetha Ikhishi Ofunayo
Khumbula ukuthi, kufanele ube nohlobo lwekhishi elizokwenza uzizwe ukhululekile ngenkathi upheka kulo. Uma ukhetha ikhishi lesimanje lokuthi ungumuntu ovuthiwe ngeke uzijabulele kakhulu. Into efanayo iya ngokukhetha ikhishi lokuvuna ngoba lisemfashinini kepha awulifuni ngempela.
Isinki lasekhishini lingabonakala likhulu ekuqaleni kepha singakuqinisekisa ukuthi lingenye yengxenye ebaluleke kakhulu yekhishi. Kungenzeka ukuthi awuyazi kepha yilokho okuheha ukunakwa okuningi ngisho nangokunakile. Uma usinki wakho wasekhishini kungewona usinki wanamuhla, omkhulu, onethezekile lapho-ke lonke ikhishi lizobukeka lilibi futhi awufuni nakancane into enjalo. Thola usinki wanamuhla ngokumane ungeze umpompi omusha kuwo.
Edlule :: Ngingayitholaphi I-Faucet Ikhishi Ehamba phambili? Olandelayo: Hlobo Luni Lombhobho Wokucima Engiwufunayo Ekhishini Lami?